Itoophiyaan Dr. Abiy Ahimad ijaaruuf deeman kan akkamiiti? - BBC News Afaan Oromoo
MM Abiy Ahimad tibbana dubbi magaalota Ameerikaa gara garaa keessaatti dubbataniin wal qabatee hariiroo eenyummaa Oromummaafi Itoophiyummaa gidduu jiru irratti gaaffiin ka'aa jira.
Hawaasni sabaaf sab-lammootaa Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiran hawaasa Itoophiyaatti akka makaman waamichi MM Abiy Ahimad taasisan gaaffilee kanneeniif ka'uumsa.
Gariin Itoophiyummaan Dr. Abiy irraa haasa'an kan eenyummaa sabootaafi sab-lammootaa of jalatte hammatedha yoo jedhan gariin ammoo Itoophiyummaan isaan haasa'an kan eenyummaa sabummaaf beekamtii hin laannedha jechuun komatu.
Oromummaa fi Itoophiyummaa
Eenyummaan kunneen lamaan eenyummaa gara garaa lama wal-simatee waliin deemuu danda'udha jedhu ogeessi Sosiyoolojiifi xiinxalaan dhimmoota gaanfa Afriikaa Dr. Birhaanuu Magarsaa.
"Itoophiyummaan eenyummaa lammummaati, Oromummaan ammoo eenyummaa sabummaati, kun eenyummaa gara garaa garuu wal-maddii deemuu danda'udha," jedhu.
Eenyummaan kunneen lamaan eenyummaa wal-maddii deemuu danda'an ta'ee osoo jiru haallii armaan dura eenyummaan Itoophiyummaa itti dhiyaachaa ture ka'uumsa rakkoo amma mul'atuuti jedhu.
Itoophiyummaan akka eenyummaa sabummaatti dhiyaataa ture kan jedhan Dr. Birhaanuun, kunimmoo eenyummaa kaan waliin morkii keessa akka galu sababa ta'eera jedhu.
'SOAS University Of London'tti barsiisaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Haabtee garuu 'Itoophiyummaa' jechi jedhu Afaan Oromootiin hiikaa hin qabu jedhu.
"Kan Afaan Amaaraan 'Itoophiyaawinnat' jedhamu ibsuuf kan itti fayyadamnu yoo ta'e, Itoophiyaawiinnatiin lammummaa kan ibsu osoo hin taane eenyummaa mataa isaa danda'edha," jedhu.
Goodayyaa suuraa 'Itoophiyaan biyya sab-daneessa aadaafi eenyummaa gara garaa qabdudha'
Yaadni 'Itoophiyaawinnat' jedhu eenyummaa sabootaa kan hin kabajne, aadaa, amantaafi afaanota biyyattii hundaaf beekamtii kan hin kennine, Itoophiyaan biyya sab-daneessa ta'uu ishee kan hin fudhannedha jedhu Dr. Ittaanaan.
"Itoophiyaawinnatiin maqaa Itoophiyaa uffatee eenyummaa sabootaa balleessudhaaf deema, Oromummaan ammoo kana hin hayyamu," waan ta'eefis eenyummaan kunneen lamaan araaramuu hin danda'ani jedhu.
Imala sabummaa waraqaa eenyummaa irraa haqsiisuu
Namni tokko Oromoo ta'ee lammii Itoophiyaa ykn 'Itoophiyaawi' ta'uu ni danda'a kan jedhan Dr. Ittaanaan Itoophiyaawinnatiin garuu waa biraati jedhu.
"Itoophiyaawiinnatiin' Itoophiyaan eenyummaa biyyaalessaa tokko qabdi yaada jedhu waan qabuuf Oromummaafis ta'e enyummaa sabummaa biroof bakka hin qabu," jedhu.
Itoophiyaa Dr. Abiy..?
Haasaan Dr. Abiy Ahimad magaalota Ameerikaa gara garaa keessatti dubbatan namoota kallattiin itti dubbatan giddu gala kan godhatedha jedhu Dr. Birhaanuun.
"Namoota fedhii gara garaa qaban garee gareen itti dubbachuun bakka tokkotti fiduuf yaali gochaa jiru natti fakkaata," jedhu.
Itoophiyaan Dr. Abiy ijaaruuf deemanis kan sabootafi sab-lammoota hunda of jalatti hammatu malee kan kanaan dura ture itti fufsiisuu natti hin fakkaatu jedhu.
Dr. Ittaanaa Haabtee garuu yaada kanaan walii hin galan.
MM Abiy Ahimad erga gara aangootti dhufanii kaasee Itoophiyaan isaan dubbatan yaada 'Itoophiyaawinnat' jedhamu kan waalteffatudha jedhu.
Dubbii isaanii qofa osoo hin taane gochaan isaaniis kanuma nuuf mirkaneessa jedhu.
Kanaafis waltajjii leenjii aartistota Itoophiyaa jedhamee waamame keessaa aartistonni Oromoo dhabamufi waltajjii simannaa pireezidantii Eertiraa Isaayyas Afawarqii irraa Abbootiin gadaa dhabamuu akka fakkeenyaatti kaasu.
"Itoophiyaa gara ulfina ishee duriitti deebifna jechuun isaaniis kanaaf ragaa biraati," jedhu.
Itoophiyaan biyya beelaafi wal-waraansaati malee ulfina tokkollee hin qabdu turte kan jedhan Dr. Ittaanaan kun yaada 'Itoophiyaawinnatii' mul'isa jedhu.
Akkamiin walitti araarsuun danda'ama?
Oromoon eenyummaa 'Itoophiyaawinnat' jedhamuufi maqaa Itoophiyaa jalatti cunqursaafi dararaan guddaan waan irra gaheef waan kana irraa qoollifachuuf sababa gahaa qaba jedhu Dr. Ittaanaan.
Haa ta'u malee "irraa baqachuu caalaa gadi baanee abbaa itti ta'uun nurra jiraata," jedhu.
"Itoophiyaan biyya eenyummaa saboota hedduu hammattu akka taatuuf Oromoon itti seenee sirreessuu ni danda'a" kan jedhan Dr. Ittaanaa "mootummaan karra cufnaan garuu carraan sun ni cufama," jedhu.
Mootummaan namoota sab-daneessummaa Itoophiyaa hin fudhanne yaada 'Itoophiyaawinnat' qofatti amanan dubbiifi gochaan humneessuu irraa of qusachuun yaada waalta'aa namoota hunda waliigalchiisutti deebi'uu qaba jedhu.
Hojiin eenyumma kana lamaan qixa sirrii ta'een hiika itti kennanii walitti araarsuu ammayyuu hin jalqabamne jedhu Dr. Birhaanuu Magarsaa.
Itoophiyummaan hunda keenya hammattu kan akkamiiti, mallattoon ishii maal fakkaata, alaabaafi faaruu akkamii qabaachuu qabdi kan jedhu kan fuulduraaf itti yaadamuu qabudha jedhu.
"Komiishiniin qaama adda addaa walitti baasee mariisisu, waan waloo namoota hunda waliigalchiisu qopheessu dhaabuun hojii eegaluun barbaachisaadha," jedhu.
Dr. Abiy Ahimad: Guyyoota 100 keessatti maaltu yoom ta'e?